Lisitr’ireo Vakiteny Fahavaratra Avy Amin’ireo Mpikambana Global Voices Teny Frantsay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2014 18:26 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Swahili, polski, عربي, 日本語, English
Manolotra ireo boky folo tsara indrindra nosoratana voalohany tamin'ny teny frantsay ireto i Andrew Kowalczuk. Angona boky malaza indrindra avy amin'ireo mpanoratra miteny Frantsay ankehitriny ireo lisitra ireo. Misy amin'ny teny Anglisy ihany koa ny ankamaroan'izy ireo (jereo ny rohy raha hijery ny dikan-teny):
Alexandre Dumas – “Le Comte de Monte-Cristo (Ny solontenan'ny mpanjaka ao Monte-Cristo)”
Charles Baudelaire – “Les fleurs du mal (Voninkazon'ny ratsy)“
Arthur Rimbaud – “Poésies (Tononkalo)“
André Gide – “Les faux monnayeurs (Ireo mpanao vola sandoka)“
Albert Camus – “La chute (Ny fianjerana)“
Eugène Ionesco – “Rhinocéros (Tokatandroka)“
Antoine de Saint-Exupéry – “Le petit prince (Printsy kely)“
Jean-Paul Sartre – “L'être et le néant (Ny misy sy ny tsy misy)“
Simone de Beauvoir – “Le deuxième sexe (Ny maha-lehilahy sy vehivavy faharoa)“
Lisitra vakiteny manoka-tsaina ampy hisafidianana ireo. Na dia izany aza, raha mila zavatra maharitraritra (lavalava) kokoa ianao , manolo-kevitra ireto somary klasika ireto i Jane Ellis:
Voltaire – “Candide” ( [miverina mamaky azy hatrany aho] )
Laurent Binet – “HHhH” ( [Mahatalanjona amin'ny fomba maro] )
Zola – “Thérèse Raquin” (maharikoriko ary lasa alohan'ny fotoana niaviany tahaka an'i Candide).
Na dia izany aza, nohatevenin'ny mpanoratra ivelan'i Frantsa ihany koa ny literatiora frankôfôna. Nanansongadina boky iray avy amin'i Amine Maalouf, mpanoratra Frantsay teraka tao Libaney i Thalia Rahme. Nanararaotra nanolo-kevitra ny lisitry ny vakinteniny ankehitriny izay tsy avy amin'ireo mpanoratra Frankôfôna ihany koa izy, tahaka an'i Gabriel Garcia Marquez ao Kolombia sy Khaled Hosseini ao Iran:
Miainga avy amin'ny lisitr'i Thalia, manolotra tantara malaza vitsivitsy avy amin'ireo mpanoratra Aziatika kosa i Alison Mcmillan:
Nanolo-kevitra ny “A Suitable Boy” ihany koa Claire Ulrich, ho toy ny “must-read” (tsy maintsy vakiana). Nanolo-kevitra tononkalo vitsivitsy ihany koa izy raha hamaky tantara foronina:
Anisan'ny ankafiziko indrindra ny “A Suitable Boy”! Ao anatin'ny fotoanan'ny “tononkalo” aho ary tsy azoko avela i Paul Eluard. Mamaky indray ny tantaram-piainan'i Gabriel Garcia Marquez, “Miaina mba hitantara azy ihany koa aho